Ogaden News Agency (ONA) – Amaan Xumo Baahsan oo Kajirta Gobolka Koonfurta Itoobiya.
Amaan Xumo Baahsan oo Kajirta Gobolka Koonfurta Itoobiya.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Hawaasa ee xarunta Gobolka Shucuubta Koonfurta Itoobiya ayaa sheegaya amaan daro baahsan oo lasoo daristay magaalada Hawasa iyo guud ahaan Gobolka Shucuubta Koonfureed.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa bilihii iyo baryihii lasoo dhaafayba Gobolka kajiray amaan xumo marba marka ka dambaysa sii badanaysay, waxaana lasheegayaa in xiliyada habeenkii ah dadka lalaayo lana dhaco.
Budh-cad abaabulan ayaa lasheegayaa in ay dhacaan goobaha ganacsiga ee dadka shacabka ah ay leeyihiin, iyagoo dilal ugaysta dadka shacabka ah ee aan hubaysnayn ama aan isdifaaci karin.
Sidoo kale dad hubaysan oo aaro doon ah ayaa lasheegayaa in ay dilaan shakhsiyaad ay colaad uqabaan oo kamid ahaa maamulkii lashaqayn jiray kooxdii TPLF iyo waliba dad shacab ah oo ay udilayaan aano qabiil oo hore.
Taliyaha Booliiska Gobolkaas oo waraysi siiyay laanta Afka Axmaariga ee Ideecada VOA ayaa sheegay in Gobolka ay kusoo badatay amaan xumo badan isagoo intaas raaciyay in ay habeen walba helaan mayd lagu tuuray goobaha qashinka iyo wadooyinka.
Ilo xog ogaal ah oo arimaha Gobolka kudhaw ayaa sheegay in ay Gobolka kujirto faro galin balaadhan oo kooxdii aga awood batay ee TPLF ay kuhayso, waxayna Ilo wareedyadu sheegayaan in wali ay kooxda TPLF saamayn kuleedahay siyaasada Gobolka.